Archive du 20170320
Honor� Rakotomanana Tsy salama ?
Nandeha be ny resaka ny herinandro lasa iny fa tsy salama ny filohan�ny Antenimierandoholona Honor� Rakotomanana, ary dia ny filoha lefitra Faritanin�i Fianarantsoa Riana Andriamandavy VII no nisolo toerana vonjimaika, nisahana ny fampandehanan-draharaha tetsy Anosikely.
Marc Ravalomanana Manetsika ny �Diaspora Malagasy� any Eoropa
Naseho voalohany tany Copenhague-Danemark ny sabotsy 18 martsa teo ilay horonantsary � Return of a president.. �,
Vehivavy hita faty teny Ambatofotsy Mitady hiitatra ho fitsaram-bahoaka
Nolazaina tao anaty lahatsoratra an-gazety maromaro ny faran�ny herinandro teo fa namoaka vava ny notoriana tamin�ity raharaha ity fa tsy matahotra ny fitsarana Malagasy satria mahafantatra olona matanjaka ao.
8 volana any am-ponja Ramaroson Tsy misy miraharaha intsony
Taraiky tanteraka i Alain Ramaroson, izay efa 8 volana no migadra any am-ponjan�Antanimora. Tena adinon�ireo manodidina azy tanteraka ity mpanao politika fanta-daza tamin�ny raharaha fanonganam-panjakana tamin�ny taona 2009 ity.
Lal�na mifehy ny fianakaviana Manentana ny fiarahamonina ny Pot�enCiel Organizing
Nanao fanentanana ho an�ireo fikambanana tsy miankina tao Toamasina ny alakamisy teo ny fikambanana Pot�enCiel Organizing na ny PCO avy any Antananarivo.
Tsy hoe tsy ampy fa very ary tsy ananan�ireo tompon�andraikitra intsony ny fahitana ny fandehan�ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny ny finiavana hitady vahaolana amin�ny zava-mitranga mitady hieli-patrana manerana ny nosy.
Lalam-pirenena faha-2 Nivadika ilay fiarabe, nirehitra avy eo
Zava-doza no niseho tany amin�ny lalam-pirenena faha-2 (RN2) ny faran�ny herinandro teo. Fiarabe iray, fantatra amin�ny anarana hoe � S�mi-remorque � irony no nivadika ary nisy tariby misy herinaratra nifampikasoka, ka niteraka firehetana teo amin�ny lohany.
Midangana ny vidim-bary Tsy mahavaha olana ny mpitondra
Mampikaikaika ny rehetra ny fidangan�ny vidin-javatra ilaina andavanandro (PPN), indrindra fa ny vary amin�izao fotoana izao.